ဒီအချိန်မှာမွတ်စလင်မ်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်နည်း။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
လေးစားအပ်တဲ့မွတ်စလင်မ် ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ အလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ကရုဏာတော် ကျရောက်ပါစေ၊ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူမွတ်စလင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ပူဆွေးသောကရောက်နေကျလိမ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။သီးခံမျိုသိပ်ကြပါအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အစားပေးတော်မူပါစေ၊ လေားကကမ္ဘာကိုပိုင်းစိုးတော်မူသောအရှင်သည် ဒီအတိုင်း ကြည့်နေ မည်မဟုတ်ပါ။
မနက်ထဲကအလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသလို ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်ဟာ ညနေငါးနာရီလောက်မှာတော့ စိတ်ညစ်စရာသတင်းဆိုးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ဘာလုပ် လို့ဘာ ကိုင် ရမှန်းတောင်မသိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်တွေညစ်လာတယ် ဒေါးသတွေထွက်လာ
တယ် ဖေစ်ဘုတ်ကိုကြည့်ပြီး ပိုဆိုးလာတယ်။ အရာရာကိုရိုက်ခွဲးချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ အတွေးပေါင်များစွာနဲ့ စိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ် ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်အတွက် အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ အလွန်ရက်စက်တဲ့ အလွန်ယုတ်မာတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ ခံယူချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ အံကိုကျိတ်ပြီး ကျက်သိမ်းထ အမြတ်ကြီးထွက်ခဲ့ရတယ်။
နောက်ဆုံးတော့လည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်ကနေ ဖြေသိပ်ပေးမှုကိုခံယူရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါးသတွေပြန်ပြေသွားခဲ့တယ်။ စိတ်ကနေသာထိုင် သာပြန်ရသွား တယ်၊ သူငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကို ဖြောင်ချက်ပေးတယ် သူငယ်ချင်းတဲ့……………
ခွေးတွေကမင်းကိုကိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီခွေးကိုမင်းဒေါးသထွက်မှာဘဲ မင်းဒေါးသထွက်လို့ မင်းအဲဒီခွေးကိုပြန်ကိုက်မလားတဲ့၊ ဟုတ်တယ် ခွေးတွေကိုက်ရင် အဲဒီခွေးတွေကို ကျွန်တော်ဘယ်ပြန်ကိုက်မလဲး။ ကျွန်တော်က ခွေးနဲ့ပြိုင်ကိုက်ရင် ကျွန်တော်ပါအဆင့်မရှိရာရောက်သွာမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီလိုအကြံပြုပေးတဲ့သူငယ်ချင်းကို ဒီဖေစ်ဘုတ် စာမျက်နှာ ကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြေားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာကဒီခွေးအာဏာရှင်တွေကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာဘဲ။ ဒါကသိပ်အရေးကြီပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တိုင်းနာလည် သဘေားပေါက်သင့်တဲ့ကိစ္စ အဲဒီကိစ္စကိုနားလည်သဘေားပေါက်ရင် တို့အောင်မြင်ကြလိမ်မယ်။
ဒီအချိန်မှာညီနောင်မွတ်စလင်မ်တွေ တစ်ခုဘဲသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုတယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ဘာကိုမှမလုပ်မိပါစေနဲ့၊ တကယ်လို့ကိုယ်က စိတ်ခံစားချက်တွေ ကိုရှေ့တန်း တင်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်မိတဲ့အခါ ပြနာကအာဏာပိုင်တွေဖန်တီးတဲ့ဆက်ဝိုင်းထဲးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖန်တီထားတဲ့အကွက်ထဲးရောက်သွားရင် မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ် လုံးနစ်နာ ဆုံးရှုံးရလိမ်မယ်။အဲဒါကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးစဉ်းစားပါ
ဒီအချိန်မှာဗလီကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖျက်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ဗလီကိုမီးနဲ့ရှုံမယ်ဆိုရင်လည်း ရှုံခိုင်းလိုက်ပါ၊ လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပါစေ ကိုယ်ဘက်ကဘာပြသနာမှမလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်ဘက်ကနေပြန်ခုခံလို့ သူတိုဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်လာသည်နှင့်အမျှ ပြသနာဟာပိုကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာကြီးထွားလာခြင်းဟာ အဆိုးရအာဏာရှင်လူယုတ်မာ တွေကို အားပေးထောက်ခံရာရောက်တယ်။ ကိုယ်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ သူတို့ကဘာဖြစ်ခြင်တာလဲ ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်။ သွေးမစူကြပါနဲ့ စိတ်အေးအေးထားကြပါ အလ္လာဟ်ထံမှာ ဒိုအာတောင်းကြပါ။ အလ္လာဟ်အရှင်သဘေားတော်ရှိပါက မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံး နေရာအနှံ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များချီးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ မျှတတဲ့တရားလမ်းစဥ်တွေကိုနှလုံးမူပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသောပြသနာများအပေါ်ရှု့မြင်သုံးသပ်ပါ။
ဒါတွေအားလုံးကိုတော့မှတ်ထားလိုက်ပါ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါ၊ နောက်ဆုံးတော့ မကောင်းကြံဘေးဓါဏ်ထိဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ရှုးကိုယ်ပြန်ပတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တရုတ် ကိုပြသနာ မရှာရဲး တဲ့အဆိုးရဟာ မွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာဘဲ ပြသနာကတ၀ဲးလည်လည်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကတော့ရှင်းနေတာဘဲ တရုပ်ကသူလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုထိတာနဲ့ အဆိုးရရဲ့အပုတ်ကိုဖော်လိုက်မှာလေ အဲဒီတော့တရုတ်နဲ့တော့ အရှုပ်တော်ပုံမလုပ်ရဲးဘူးလေ၊
အဲဒီအတွက်မွတ်စလင်တွေကိုပဲဆက်တိုက် ဆက်တိုက်လုပ်သွားမှာပါ။ အရင်ထဲးကကျွန်တော်ပြေားပြီးပါပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့သတင်းမီဒီယာတွေက သူတို့ရဲ့သမိုင်းဖော်မယ့်သူတွေဘဲ။ ကမ္ဘာကသိပါတယ် သမိုင်းဆိုးကြီးတစ်ခုကို လက်ရက်ခေါ်နေတဲ့အဆိုးရမှာ ဘားကိုမှကြောက်ရွံမှုတွေမရှိသေပါဘူး၊ ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘေားပေါက်ခြင်းဖြင့် မွတ်စလင်ညီနောင်များ အနေဖြင့် မည်သည့်တုန့်ပြန်မှုကိုမှအလုပ်ကြပါရန် အနူရ်းညွှန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး စိတ်တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ခရီးရှေ့ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ဒိုအာပြုလိုက်ပါတယ်။
← မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ကိုဌေးလွင်ဦးရဲ့ ဆွေးနွေးချက်များ
ဗလီကို ချစ်သူများ၏ နေ.တနေ. / မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၃) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၃)” →